Nidaamka Xirfadlaha Noocyo 30 Xili Xulasho ah Xulasho
Professional Lipstick Long-lasting 30 Colors Optional - 01 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Magaca Brand: NOLOSHADA LIVE
Dheefta: Waqti dheer
Lipstick aad u fiican oo bixiya adeegyo dabool wanaagsan saacadaha
Waxaa ku jira dareereyaal qoyan oo bushimaha ka dhigaya kuwo jilicsan oo jilicsan
Dharka dheeraadka ah iyo biyuhu aanay lahayn, suuf.
30 doorashooyin midab leh, oo loogu talagalay dumar kasta.
Nooca: HOLD LIVE
Miisaanka saafiga ah: 0.13oz / 3.8
Midabka: 30 Color Options
Shatiga Caafimaadka: GD.FDA (2015)
Shatiga Soo-Saarka: 29-XK-4298
Heerka Sare: QB / T1977-2004
Sida loo isticmaalo: Si toos ah u dalbashada dibnaha tuubada ama waxaad isticmaashaa codsi cad oo dheellitiran. Xidhmada Macluumaadka:
1 * naas-nuujinta
Xidhmada miisaanka: 1.76oz / 50g
1. Fadlan ha ujeedooyin kale oo aan ahayn qurxinta.
2. Fadlan ha dhigin qorraxda tooska ah ama heerkulku aad u sarreeyo ama aad u hooseeya.
3. Ka fogow gaaritaanka carruurta.
wax soo saarka kaamil ah
Liin wanaagsan Midabku waa u dhigmaa
Lipstick wanaagsan, mahadsanid
Midab qurux badan, ur wanaagsan
Waan jeclahay midabka